Toe-panahy araka an'Andriamanitra
"Ary niara-nandeha tamin'Andriamanitra Enoka ka tsy hita izy, fa nentin'Andriamanitra" - Gen. 5:24.
Ny toe-panahy araka an'Andriamanitra no vokatry ny toetra kristianina. Raha mitoetra ao amin'ilay Voaloboka isika, dia hamoa ny voan'ny Fanahy. Hiseho amin'ny alalan'ny sampany ny fiainan'ilay Voaloboka. Tsy maintsy manana fifandraisana akaiky sy manokana amin'ny lanitra isika, raha toa ka mitondra ny fahasoavan'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Tsy maintsy nasaina manokana ao an-tokatranontsika, isan'ny ankohonantsika, i Jesôsy, raha toa ka hita ety amintsika ny endriny ary asehontsika fa tena zanaka lahy sy zanaka vavin'ny Avo Indrindra isika.
Zavatra mahafinaritra ao an-tokatrano ny fivavahana. Ho tsapantsika fa anisan'ny fianakavian'i Kristy any an-danitra isika raha toa ka miara-mitoetra amintsika ny Tompo. Ho tsapantsika fa mijery antsika ny anjely, ka halemy fanahy sy hahari-po isika. Ho mendrika hiditra ao an-kianjan'ny lanitra isika rehefa kolokolointsika ao anaty ny fahaizana manaja sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ho masina ny resaka ifanaovantsika, ary ny zavatry ny lanitra hatrany no hosainintsika.
Niara-nandeha tamin'Andriamanitra i Enoka. Nanome voninahitra an'Andriamanitra izy teo amin'ny lafim-piainany rehetra. Izao no nanontaniany tao an-tokatranony sy tamin'ny asa fanaony: "Eken'ny Tompo ve izao zavatra izao?" Ary tamin'ny alalan'ny fahatsiarovana an'Andriamanitra sy ny fanarahana ny torohevitra avy Aminy no nanovana ny toetrany, ka tonga manana toe-panahy araka an'Andriamanitra izy, ary nanana fomba nahafaly ny Tompo. Asaina ampiantsika fitiavana ny rahalahy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Tena ilaintsika fatratra ny miroso amin'izany dingana izany, ka hanampy izany ho anisan'ny toetsika. Misy toe-tsaina henjana sy lian'ady miseho ao anatin'ny ankamaroan'ny tokatranontsika. Mampalahelo an'Andriamanitra ny teny fitsikerana sy ny fihetsika tsy misy fitiavana. Tsy ekena any an-danitra ny didy jadona sy ny fanao feno avonavona sy manjakazaka. Ny tsy fahaizan'ny mpirahalahy mifaneho fitiavana no antony mampisy ireo fahasamihafana maro eo amin'izy ireo. Tokony hanana izany fitiavana izany ho an'ny hafa isika, tahaka ny nitiavan'i Kristy antsika.
Tombanan'ny Tompon'ny lanitra amin'ny tombambidiny ny olona iray. Raha toa ka tsy mora fanahy ilay olona ao amin'ny tokantranony ety an-tany, dia tsy mendrika ny hiditra amin'ny tranony any an-danitra ihany koa izy. Raha toa ka izay tiany ihany no ataony, na iza na iza no malahelo vokateizany, dia tsy hahafaly azy ny lanitra raha tsy afaka manapaka any izy. Tsy maintsy mifehy ny fontsika ny fitiavan'i Kristy, ary ny fiadanan'Andriamanitra no hitoetra ao am-pontsika. — RH, 21 Feb. 1888.